Cristiano Ronaldo oo markii ugu horreysay ka hadlay dib ugu soo laabashadiisa Manchester United – Gool FM
Cristiano Ronaldo oo markii ugu horreysay ka hadlay dib ugu soo laabashadiisa Manchester United
Haaruun August 31, 2021
(Manchester) 31 Agoosto 2021. Weeraryahan Cristiano Ronaldo ayaa markii ugu horreysay waxa uu ka hadlay dib ugu soo laabashadiisa Kooxda Manchester United.
Ronaldo ayaa farxad ka muujiyey dib ugu soo noqoshadiisa garoonka Old Trafford, isagoo ka soo dhaqaaqaya Juventus, waxaana uu xusay in Manchester United ay mar walba qeyb qaas ah ku lahayd qalbigiisa.
Waxa uu xiddiga xulka qaranka Portugal uu heshiis labo sanadood ugu biiray kooxda uu hoggaamiyo Macallin Ole Gunnar Solskjaer, labada kooxood ee Man Utd iyo Juve ay maanta wada shaaciyeen inay xiddigaan kala iibsadeen.
Red Devils ayaa sidoo kale qiyaar u haysata in heshiiska CR7 lagu kordhiyo sanad kale oo dheeri ah haddii loo baahdo, 36-sano jirkaan ayaana xiddigaha kooxdiisa Manchester United ku soo biiraya kaddib marka xulkiisa qaranka Portugal kala qeyb-qaato isreeb-reebka Koobka Adduunka.
Cristiano Ronaldo oo markii ugu horreysay ka hadlay dib ugu soo laabashadiisa Kooxda Manchester United ayaana yiri: “Manchester United waa koox had iyo jeer qeyb qaas ah ku lahayd qalbigeyga, ma sugi karo inaan ku ciyaaro Old Trafford, garoonka oo buuxa iyo inaan markale arko dhammaan taageerayaasha.
“Waxaan rajeynayaa inaan ku biiro kooxda kaddib kulammada caalamiga ah, waxaana rajeynayaa inaan heleyno xilli ciyaareed aad u wanaagsan.”
RASMI: Kooxda Manchester United oo faah-faahisay heshiiska ay kula soo wareegtay Cristiano Ronaldo
RASMI: Leeds United oo ku dhawaaqday inay dhameystirtay heshiiska Daniel James